ओखलढुंगामा भुस्याहा कुकुरको आतंक – www.visionfm.org
ओखलढुंगामा भुस्याहा कुकुरको आतंक
एन्टिरेविज भ्याक्सिन अभाव
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ०९, २०७५ समय: १०:४३:४४
ओखलढुंगा- ओखलढुंगामा भुस्याहा कुकुरको आतंक बढेको छ । जिल्ला सदरमुकाम स्थित सिद्धिचरण नगरपालिका क्षेत्र र जिल्लाका मुख्य तथा सहायक व्यापारीक केन्द्र आसपासमा भुस्याहा कुकुरको आतंक बढेको हो । सदरमुकाम बजार क्षेत्रमा जथाभावी छाडिएका कुकुरले टोक्न थालेपछि बालबालिका जोगाउन समस्या भएको स्थानीय तिलक श्रेष्ठले बताए । भुस्याहा कुकुर नियन्त्रण गर्न प्रशासन र नगरपालिकाले चासो दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
सुनकोशी गाउँपालिकाको मुलखर्कमा पनि कुकुरको आतंक मच्चाएको छ । विद्यालय जाने बालबालिकालाई पनि कुकुरले टोक्न थालेपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन् । कुकुरले धमाधम मान्छे र पशु चौपायलाई टोक्न थालेसँगै कुकुर नियन्त्रणको माग गर्दै लागि स्थानीयहरु वडा कार्यालय आउने गरेको सुनकोशी गाउँपालिका ५ का अध्यक्ष वडा अध्यक्ष गोविन्दराम तामाङले बताए । पशुसेवा कार्यालय र जिल्ला स्वास्थ्य सँग भुस्याहा कुकुर नियन्त्रण र भ्याक्सिनका लागि आग्रह गरेको उनले सुनाए ।
भ्याक्सिन अभाव,उपचारका लागि काठमाण्डौं धाउनुपर्ने बाध्य
सुनकोसी गाउँपालिका वडा नं. ६ का डम्बरबहादुर कार्कीका दुई नाबालक छोरालाई ०७५ असार २७ गते कुकुरले टोकेर घाइते बनायो । गाउँपालिकाभित्र उपचारका लागि एन्टिरेविज भ्याक्सिन नभएपछि गम्भीर घाइते ८ वर्षका बालक हेमन्त कार्की र ११ वर्षका हेम कार्कीलाई उपचारका लागि काठमाण्डौ लगियो ।
कुकुरको टोकाइले गाउँमा पाँच वटा गाइभैसी समेत घाइते भए । गाउँपालिकाको शाखाका पशुलाई लगाउने भ्याक्सिन पनि भएन । सुनकोसीमा मात्र होइन जिल्लाभर एन्टिरेविज भ्याक्सिन अभाव छ । मान्छेलाई लगाइने भ्याक्सिन भने जिल्ला अस्पताल रुम्जाटारमा रहेको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख मोहन सुवेदीले बताए । ‘जिल्ला अस्पतालमा चाँही छ, अन्त भण्डारणका समस्याले कतै छैन ।’ उनले भने । भण्डारणका लागि विशेष प्रकारको फ्रिज आवश्यक रहेको उनको दावी छ ।
पशु वस्तुको भ्याक्सिन पनि अभाव
त्यस्तै पशुलाई लगाइने भ्याक्सिन पनि स्थानीय तहमा छैन । स्थानीय तहले खरिद गर्ने कार्यक्रम नराखेको र जिल्लामा कुनै कार्यक्रम नरहेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय ओखलढुंगाका प्रमुख विदुर गौतमले बताए । ‘स्थानीय तहले भ्याक्सिनको कार्यक्रम नै राखेका छैनन्, जिल्लाबाट खटाइएका कर्मचारीलाई पनि वडा सचिव बनाइएको छ’ प्रमुख गौतमले भने । स्थानीय सरकारको वेवास्ताका कारण रेविज लागेका कुकुरले टोकेका व्यक्ति तथा पशुको उपचारका लागि ओखलढुंगाका स्थानीय तहमा एन्टिरेविज भ्याक्सिन अभाव भएको छ । भ्याक्सिन अभाव भएपछि रेविज लागेको आशंक गरिएका कुकुर टोकेका विरामी उपचारका लागि राजधानी धाउनु पर्ने बाध्यता छ ।
पशु सेवाले खटाएको प्राविधिक अञ्चलराज नेपाललाई सुनकोसी गाउँपालिकाले वडा नं. ७ को वडा सचिव बनाएर खटाएको छ । पशुको उपचार गर्ने काममा खटिएका कर्मचारी सचिव भएपछि पशुपालक किसानले सेवा पाउन सकेका छैनन् । कर्मचारी अभावले यस्तो समस्या आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले दुध र माछामा आतम निर्भर बनाउने नीति ल्याए पनि पशुलाई दिइने भ्याक्सिन सम्म खरिद गरेर भण्डारण गर्न नसकेको भन्दै कृषकहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् ।
जिल्लामा स्थानीय तहले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पशुसेवा जस्ता कार्यक्रमभन्दा सडक निर्माणलाई प्रथामिकता दिएपछि यी क्षेत्र ओझेलमा परेका छन् ।